သတင်း - IMMUNOBIO SARS-CoV-2 ပeutိဇီဝပစ္စည်းအားပျက်သုဉ်းစေသည့် Rapid Test ကိုယခုပင်ရရှိနိုင်ပြီ
Immunobio သည် COVID 19 Neutralizing antibody Rapid Test ကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်ခဲ့ပြီး၊ CE နှင့် Chinese Approved တို့ဖြင့်စမ်းသပ်ထားသောကိရိယာ。
၁။ IMMUNOBIO SARS-CoV-2 ခန္ဓာကိုယ်ကိုပျက်စီးစေသော Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွက်သာဖြစ်သည်။
၃။ IMMUNOBIO SARS-CoV-2 ကြားနေအန်တီဂျီ Rapid Test (COVID-19 Ab) ကိုအပြိုင်အဆိုင်နည်းလမ်းဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ရလဒ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်နည်းလမ်းသည် COVID-19 IgG / IgM စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ် COVID-19 နှင့်ခြားနားသည်
4. Antigen စမ်းသပ်မှု။ assay မလုပ်မီအော်ပရေတာသည်အသုံးပြုရန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်ကိုသေချာစွာဖတ်သင့်သည်။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ဤထုတ်ကုန်ကို CIBG မှခွင့်ပြုထားသော CE ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ ဤကုန်ပစ္စည်းကိုတရုတ်ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အဖြူရောင်စာရင်းတွင်လည်းဖော်ပြထားသည်။
6. ကျန်းမာရေးနှင့် quarantine အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပေးသည့်အထူးဆောင်းပါးများအတွက်အတည်ပြုချက်လက်မှတ်ကိုလျှောက်ထားရန်အလုပ်လုပ်ရက် (၅) ရက်ရှိသည်။ ဤကုန်ပစ္စည်းအားတင်သွင်းလိုသောကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မည့်ရက်ကိုအတိုကောက်စောလျင်စွာအမြန်ဆုံးမှာကြားသင့်သည်။
IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) သည် SARS-CoV-2 သို့မဟုတ်ယင်း၏ကာကွယ်ဆေးများအားလုံးကိုသွေး၊ သွေးရည်ကြည်သို့မဟုတ်ပလာစမာများအတွင်းရှိအရည်အချင်းပြည့်မှီသောပdetectionိပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်အမြန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Package အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 20 T / kit, 1 T / kit ။
SARS-CoV-2 ကြားနေသည့် Antibody ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
SARS-CoV-2 မှကြားနေသည့်ပantibိပစ္စည်းများသည် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ဆယ်လူလာစိမ့်ဝင်မှုကိုတားဆီးနိုင်သောပantibိပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ကြားနေသည့်ပantibိပစ္စည်းများသည် S ပရိုတင်း RBD ကိုဗိုင်းရပ်စ်မှဆဲလ်ရှိ ACE2 receptors များသို့ပိတ်ဆို့တားဆီးထားသည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးနောက်ပြန်လည်နာလန်ထူသို့မဟုတ်အောင်မြင်စွာကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင်ထိုကဲ့သို့သောကြားနေသည့်ပneutိပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပြီး SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကူးစက်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။
IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) ကိုသွေးထဲမှာကြားနေတဲ့ပantibိပစ္စည်းများ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုတယ်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏အကာအကွယ်စွမ်းရည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အသုံးပြုသည်။
SARS-CoV-2 Antigen Uncut စာရွက်
COVID-19 IgG / IgM Uncut စာရွက်